Réponses pour «firenena»:
Total: 43 résultats - 0.113 secondes
Mafy koa raha mafy fa tena nahéry vaika tokóa ny fiatraiky ny Ady Mangatsiaka sy ny Fifañinañana nandéfa olona tañy ambóny mihoa-maso tañy izáy nifandriatan’ny Firerénéna Tandrefana sy ny Firenéna tañy amin’ny Tany Kômînişįta Tatsinana ;
Madagascar PRSP Malagasy 97%
dany 8.3 93%
LOHATENY VOALOHANY NY AMIN'NY FENI-KEVITRA FOTOTRA Andininy voalohany.- Firenena iray ny Vahoaka Malagasy ka mivondrona ho Fanjakana masi-mandidy, tokana, repoblikana ary tsy mampifangaro ny fitondram-panjakàna sy ny finoana.
Nanomboka ny 17 marįşa 2003, dia nodabohan’ny Amerikáŋā sy ny Ãgįlίşy ny bỗba araka izáy tratra ny Firenéna Irakiáŋā;
Marina koa ny ampaham-panazavan’ny mpitondra ankehitriny hoe tsy ho vita mora na ho vita haingana ny fanarenana ny Firenena avy anatin’ny hantsana misy azy izao satria vokatry ny Tantara sy fifampitondranana nodiavina nandritra ny 54 nahaleovantena fara fahakeliny no hahitsy.
Foana tao anatin‟ny tantaran‟ny Firenéna Fįrãşáy, ny Sazy-Fanamelohana-ho faty Olombelona iráy na inona na inona heloka vitany.
Paleşįtίŋā, no Tany sy Firenéna nonenan’Izy Andriamanitra Jesóa Kįrişįtý, tamin’ny andro nanjakán’ny Ãperóra Rômáŋā Tibéra.
Efa hita soritra mazava ihany koa izao fa mifono fanamby ara ekonomika sy ara tafika lehibe ho an’ny firenena tompony ireo nosy ireo.
dany .24 77%
Nibáby ny valim-pilazána ny fahamarinana voalohany tamin’ny vahoaka Malagasy moa, tamin’izány vanindro izány, Voninahitsa Jean Eugène izáy sahy nampibaribáry ampahibemáso fa halatra tanteraka no nataon-dRatsiraka Didier Ignace tamin’ny vahoaka sy ny Firenéna Malagasy, tamin’ny fampiasány ho amin’ny tombotsoany manokana ny Tetezana ahevahevan’Ivoloina–Pont flottant d’Ivoloina-;
Nanjáka tañy amin’ny Firenéna Zerįmanίka rehétra tañy, ny Finoana fañitsiana naferin’ny olona toa an-dry Martin Luther [Marįtẽ Lîtéra] sy ry Calvin [Kalįvẽ].
Programme 6e Forum international des Caravanes 71%
Manodidina ny firenena 50 eo no iasan’ity fikambanana ity amin’ny alalan’ny hetsika artistika sy arakolontsaina anehoana ny tena asan’ny teny frantsay sy ny lanjany eo amin’ny sehatry ny fifampizarana.
FANDAHARANA TILY MAITSO 67%
dany .27 66%
2106 2107 Tsy nisy hafa amin’ny tantaran’ny Kômîŋin’Ivato-Seranampiaramanidina izay saika natambatra tamin’Antananarivo Renivohitra ity Allauch ity izay saika natambatra tamin’i Marseille Zava-doza ny hatavizana any amin’ny Tany sy ny Firenéna rehétra efa mandroso any I Toulon no isian’ny Tobin’ny Tafika Andranomasina farany izay lehibe indrindra ho an’ny Fįraşay 2108 Io misy orinasa iray izay mpikarakara fitsangatsangana any Toulon any.
FANAMBARANA 160816 66%
Manantena izahay fa manaja ny soatoavina demokratika sy manaiky ny foto-pisainana mifototra amin’ny fahalalahana ny tompon’andraikitra eto amin’ny firenena.
Tsy raidraisim-poana ny olona izáy ao anatin‘izány «ivontoerana» be voninahitra izány, fa tena olona izáy tsongoim-bolo tokóa eo amin‘ny tany ama-monina no antsoina sy tendréna ho mpikambana ao, satrίa nofidίna tanatin‘ny maro mba hanatevin-daharana ny Akademίa iráy izy, ao anatin‘ny Firenéna iráy;
dany .30 59%
Nisy fanadihadiana momba ny rahalahin’i Jesoa Kįrişįty, tany amin’ny Tany sy ny Firenéna Mandroso maro, hono, ho an’ny Finoana Kįrişįtiaŋā.
Nanáo fanambarána tamin’ny Fankalazána ny tsingerintaona fahatsiarovana ny fetim-pirenény ny Ãbaşadốro Şoίşa fa tena mampangoraka ny maházo ny Firenéna Malagásy.
TADY LAHARANA 186 54%
Mifanaraka amina sekoly na ivontoeram-panabeazana frantsay ny Madagascours ary ao anatin= ny firenena ampiany i Madagasikara.
GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES - PROJET INCIPALS 50%
Ny tanjona moa dia ny mba hanentanana ireo izay voakasik’izany ary koa hisarihana ny sain’ny rehetra ny amin’ny atao hoe fahafahana sy ny andraikitry ny mpanao gazety eo anivon’ny firenena.